Izinkinga | October 2021
Main > Izinkinga
ifilimu ngeke ivulwe
IFiloraora ngeke ivule - ungayilungisa kanjani
Ngililungisa kanjani iphutha le-KB2919355? Isinyathelo 1: Faka i-patch KB2919442 Isinyathelo 2: Faka i-patch KB2919355. Qaphela ukuthi i-KB2919355 ayisona isichibi esisodwa kepha iphakethe lama-KBs, njengoba kunikezwe kumiyalo ye-Microsoft, adinga ukufakwa ngale ndlela elandelayo: ... Isinyathelo 3: Zama futhi ukufaka i-SQL Server.
i-silverlight ngeke ifake
ISilverlight ngeke ifake - ithola izixazululo
Ngikuphoqa kanjani ukususa ukungaboni ngaso linye? Khipha i-Discord kusuka ku-PCOpen Start> Settings> System> Apps & Features.Bheka iDiscord, chofoza ku-Delete bese uqinisekisa ukususwa.
i-knctr ngeke ikhiphe
I-Knctr ngeke ikhiphe - izixazululo zezinkinga
Kungani ikhompyutha yami ingakwazi ukuxhuma kwiGroup Home? Qiniseka ukuthi iphasiwedi yeqembu lasekhaya ayikashintshi. Ungahlola iphasiwedi yeqembu lasekhaya kwenye ikhompyutha bese uyisebenzisa ukujoyina iGroup Home. Bese uchofoza ku-Buka noma phrinta iphasiwedi ye-HomeGroup. Uma udinga, shintsha iphasiwedi ye-HomeGroup kukhompyutha ozama ukuyixhuma kuGroup Home.
kb4056892 ngeke ifake
I-Kb4056892 ngeke ifake - ireferensi ephelele
Ingabe iZwift iyasebenza Windows 10? I-Zwift ingaqhutshwa ku-Windows, iOS, iPhone, iPad noma ku-AppleTV, manje i-Google Play. 2020
Ukudiliza ngeke kusebenze
I-Dism ayizukuqalisa imibuzo nezimpendulo ezisohlwini
Yini engiyenzayo uma iTurboTax yami ingalayishi? Ukulungisa isoftware yakho Ukuze kulungiswe le nkinga, amakhasimende azodingeka ukuthi akhiphe inguqulo yawo yamanje yeTurboTax, aphinde alande kabusha, abuye afake kabusha isoftware. Le nqubo kufanele futhi yenze inguqulo yakho yeTurboTax isebenziseke.